Nagarik Bazaar - इण्डक्सन कि ग्यास ? उचित कुन?
भान्साको लागि खाना पकाउनलाई चुल्हो खरिद गर्दा तपाईंसंग मुख्यतः दुईवटा विकल्प छ – इण्डक्सन र ग्यास । यी दुई चुल्हो एकआपसमा धेरै फरक छन् कि यिनीहरुमा खाना पकाउनका लागि पनि बेग्लै किसिमको भाडाहरु प्रयोग हुन्छ । यसै कारणले राम्रोसंग सोचेर र बुझेरमात्र कुनै एकमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ । यी दुवैका आफ्ना आफ्नै फाइदा र बेफाइदाहरु छन् जसका बारेमा बिस्तृत जानकारी तल दिईएको छ:
इण्डक्सन चुल्होले खाना पकाउने भाडालाई चुम्बकीय इण्डक्सनबाट तातो बनाउछ । अर्को तरिकाले भन्नु पर्दा भाडा आफै चुम्बकीय इण्डक्सनले तात्छ र खानालाई पकाउछ । इण्डक्सनबाट ताप सरुवा हुने भएकाले भाडाको तापको मात्रालाई सजिलैसंग नियन्त्रण गर्न मिल्छ । यस कारणले इण्डक्सन चुल्होलाई विशेष किसिमको भाडाको आवश्यकता पर्छ – खाना पकाउने भाडाको मुनि पट्टिको भाग चुम्बकीय हुनुपर्छ।
विद्युत खपतमा कुशल र खाना पकाउन साधारण ग्यासभन्दा चाडो
बालबालिका मैत्री – अप्रत्याशित दुर्घटना हुने सम्भावना अति न्यून
इण्डक्सन चुल्होले भाडालाई मात्र तातो बनाउछ।अर्थात्,भान्सा कोठाको तापक्रमलाई केही असर गर्दैन।
खाना पकाउने भाडाको तापक्रम सजिलैसंग नियन्त्रण गर्न सकिने
विद्युतीय खाना पकाउनेभन्दा धेरै सस्तो र सुरक्षित
स्थापना गर्न र सफा गर्न धेरै सजिलो
स्थापना गर्न अन्यभन्दा धेरै महँगो
खाना पकाउनका लागि विशेष किसिमको भाडा चाहिने
इण्डक्सन चुल्हो सिसाले बनेको हुने भएकाले फुट्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ
इण्डक्सनका भाडाहरु अन्यभन्दा महँगो हुन्छन
भाडा तात्नलाई ग्यासभन्दा धेरै समय
थुप्रै खानाका परिकारहरु यसबाट पकाउन सकिदैन
ग्यास चुल्होमा खाना पकाउने भाडालाई ग्यास बलेर निस्किएको ज्वालाले तातो बनाउछ । यसका लागि छुट्टै ग्यासको सिलिन्डर कि त ग्यास पाइपबाट ग्यासको निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्छ । ग्यास चुल्होमा जस्तोसुकै भाडा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो हालसम्मको सबैभन्दा प्रचलित खाना पकाउने विधि हो । यसका विविध फाइदा र बेफाइदाका बारेमा तल चर्चा गरिएको छ:
ग्यास चुल्होका फाइदाहरु:
ग्यास चुल्हो चालु गर्ना साथ ताप आउन सुरु हुन्छ – इण्डक्सनमा जस्तो पर्खिरहनु पर्दैन
सबै जसो खानाका परिकारहरु ग्यास चुल्होबाट पकाउन सकिन्छ
ग्यास चुल्होमा बेग्लै भाडाको आवश्यकता पर्दैन​
ग्यास चुल्होका बेफाइदाहरु:
निरन्तर ग्यासको आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ
ग्यास लिक र दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ
यी चुल्होहरु बाल मैत्री हुदैनन्
ज्वालाबाट निस्किएको सबै ताप भाडामा मात्र जान्छ भन्ने हुदैन , त्यसैले खाना पकाउदा भान्सा कोठा तात्ने समस्या हुन्छ
धेरैजसो चुल्हो स्टिलले बनेका हुन्छन् जुन सफा गर्न गाह्रो हुन्छ
ग्यास पाइप वा ग्यास चुल्हो फिट गर्न विशेषज्ञको आवश्यकता पर्छ
समग्रमा कुन उचित?
ग्यास र इण्डक्सन दुवैको आफ्ना आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छन् । यी दुईमध्ये एउटालाई उचित र अर्कोलाई अनुचित भन्नु मिल्दैन । तपाईंको आफ्नो घर परिवारको आवश्यकता र बजेटको मूल्यांकनबाट मात्र तपाईको लागि कुन उचित भन्ने कुराको उत्तर आउछ।
हालको कुल लागतको आधारमा:
प्राय नेपालमा सबैको घरमा अहिले ग्यास चुल्हो नै छ । नेपालमा भोजन पकाउने शैली र तरिकाहरु पनि ग्यास चुल्हो कै लागि विकास हुदै आएको छ । सबैको घरमा ग्यास चुल्होमा चल्ने भाँडाकुँडा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन्छन । यसर्थ, ग्यास चुल्होबाट इण्डक्सन चुल्हो तर्फ परिवर्तन हुन जो कसैलाई पनि महँगो पर्न जान्छ । धेरै जसो भइरहेका भाँडाकुँडा काम लाग्दैनन् र खाना पकाउने अलि बेग्लै काइदाको आवश्यकता पर्न सक्छ । अतस् अहिलेको लागि चाहिँ बजेटलाई ध्यानमा राख्दा ग्यास चुल्हो नै उचित हुन्छ । निकट भविष्यमा इण्डक्सन तर्फ परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्न भने ग्यास चुल्हो कै प्रयोग गर्नुमा पनि केहि बेफाइदा छैन ।
सहजताको बारेमा सोच्दा:
सम्भार गर्न र प्रयोग गर्न त सजिलो इण्डक्सन चुल्हो नै हुन्छ । तर नेपाली बजारमा यी अलिक महँगो नै छ र बिग्रिएमा मर्मत गर्न पनि सजिलो छैन । बेला बेलामा बत्ति गइरहने समस्या त बेग्लै छ । अर्को पाटोमा हेर्दा ग्यास चुल्हो प्रचलित छ । यसका ग्यास सिलिन्डरहरु चोक चोकको पसलमा पाइन्छन् । बत्ति होस् नहोस् ग्यास चुल्होबाट सजिलै जे मन लाग्छ त्यहि बनाउन सकिन्छ । अब, तपाईलाई सम्भार गर्न सहज हुने इण्डक्सन र प्रयोग गर्न सहज हुने ग्यास चुल्हो मध्ये कुन चाहिँ उचित लाग्छ, यो त तपाईको आफ्नै रोजाईको बिषय हो ।
भविष्यको बारेमा सोच्दा :
इण्डक्सन चुल्हो नै भविष्य हो र क्रमागत रुपले ग्यास चुल्होको प्रतिस्थापनमा इण्डक्सन चुल्हो नै आउने छ । इण्डक्सन चुल्हो सफा हुन्छ , सहज हुन्छ र सुरक्षित हुन्छ । नेपालमा वर्षौ देखि दैनिक लोडसेडिङ हुदै आइरहेको थियो जसले गर्दा मानिसहरुलाई इण्डक्सन चुल्हो खरिद गर्न निरुत्साहित पारेको थियो । तर हालै नेपाल सरकारले घरेलु प्रयोजनका लागि कुनै लोडसेडिङ नहुने घोषणा गरेको छ । यसले मानिसहरुलाई इण्डक्सन चुल्हो खरिद गर्न प्रोत्साहन दिलाउन सक्छ र इण्डक्सन चुल्हो नेपालमा पनि प्रचलनमा आउन सक्छ । ग्यासमा परनिर्भरता चाहिँ इण्डक्सन चुल्होको व्यापक प्रयोगबाट हट्न सक्छ ।
अतस् भविष्यको बारेमा सोच्दा चाहिँ इण्डक्सन चुल्होलाई धेरै उपयुक्त मान्न सकिन्छ । नयाँ घर बनाउदै हुनुहुन्छ वा परिर्वतनको सोचमा हुनुहुन्छ भने घरमा इण्डक्सन र ग्यास चुल्हो दुवै राख्नु ठीक हुन्छ ।
घरमा स्मार्ट लाइट
एल्मुनियम र काठको विकल्पमा युपिभिसी (uPVC)